Ihe kpatara Digital Asset Management bụ akụkụ dị oke mkpa na usoro teknụzụ Azụmaahịa | Martech Zone
Wenezde, August 27, 2014 Wednesday, October 28, 2020 Jenn Lisak Golding
Dị ka ndị na-ere ahịa, anyị na-emeso ọtụtụ ngwaọrụ na ngwa kwa ụbọchị. Site na ahia akpaaka na nsuso ahia rue ahia email, anyi choro ihe ndi a iji mee oru anyi nke oma ma jikwaa / soro uzo mgbasa di iche iche anyi tinye.
Agbanyeghị, otu akụkụ nke teknụzụ azụmaahịa azụmaahịa nke ana eleghara mgbe ụfọdụ bụ otu anyị si ejikwa faịlụ anyị, gụnyere mgbasa ozi, onyonyo, ederede, vidiyo na ndị ọzọ. Ka anyị chee ya ihu; ị gaghị enwe ike ịnweta folda na kọmputa gị iji jikwaa ọrụ ọzọ. Chọrọ ebe nchekwa etiti maka otu gị iji nweta ma kekọrịta faịlụ ndị dị mkpa ma na-edobe ya. Ya mere njikwa ihe onwunwe dijitalụ (DAM) bu ihe di nkpa nke usoro ihe omuma ahia.
Widen, onye na-eweta DAM nwere njikọta dị ukwuu, mepụtara ihe omuma a na ihe kpatara DAM ji bụrụ akụkụ dị mkpa nke usoro teknụzụ azụmaahịa, na-egosi ụzọ dị iche iche ọ na-esi kwado ọrụ anyị dị ka ndị na-ere ahịa kwa ụbọchị. Fọdụ ihe na-adọrọ mmasị site na infographic gụnyere:
Ndị na-ere ahịa na-eme atụmatụ mụbaa ego dijitalụ maka njikwa ọdịnaya site na 57% na 2014.
75% nke ụlọ ọrụ nyochara ebe na-ewusi atụmatụ ọdịnaya ahịa dijitalụ dị ka ihe kachasị mkpa ịzụ ahịa dijitalụ.
71% nke ndị ahịa ahịa bụ iji Digital Asset Management ugbu a, na 19% na-eme atụmatụ iji DAM n'afọ a.
Lelee akwụkwọ ozi ha ma mụtakwuo banyere otu ị ga - esi jiri DAM maka azụmahịa gị.
Mụta Banyere Wgbasapụ
Ngosipụta: Agbasapụ bụ onye ahịa nke ụlọ ọrụ m.
Tags: ọdịnaya managementoké egwudamnjikwa ihe onwunwe dijitalụnjikwa faịlụ kwadoroinfographicahia damteknụzụ ahịagbasaa
Nke a bụ otu ị si mepụta ihe ndị ọzọ na Social Media